Kwethulwe umbiko ngengozi yetekisi nesitimela | News24
Kwethulwe umbiko ngengozi yetekisi nesitimela
Ingozi enyantisa igazi phakathi kwetekisi nesitimela eyenzeka ngoNcwaba (August)
UMEYA waKwaDukuza uMnuz Ricardo Mthembu uwamukelekile umbiko odalule imbangela yengozi yetekisi nesitimela eyenzeka eShaka’s Head ngo mhla ka-17 kuNcwaba (August).
Lo mbiko wethulwe nguNgqongqoshe wezokuThutha ukuPhepha nokuXhumanisa uMphakathi KwaZulu-Natal uMnuz Willies Mchunu esiShayamthetho sesifundazwe ngeledlule.
UMnuz Mchunu uthe lo mbiko uveze ukuthi umshayeli wetekisi akawuthobelanga umthetho womgwaqo ngenkathi efika ku-stop.
Okunye okuvele kulo mbiko ukuthi itekisi ibingekho esimeni esifanele ukuba ingaba semgwaqeni.
UMeya uMnuz Mthembu uthe: “Umbiko uyaveza ukuthi umshayeli wetekisi akawuthobelanga umthetho womgwaqo ngenkathi efika ku-stop. Okunye okuvelile ukuthi ama-brake etekisi abengasebenzi ngendlela efanele.
Ngiyathemba uMnyango uzothobela imbono ebekiwe kulo mbiko,” kusho uMeya.
UMnuz Mchunu uthe okunye okuvele kulo mbiko ukuthi letekisi yanikezwa isitifiketi esishoyo ukuthi ayikufanele ukuba emgwaqeni.
Uqhube wathi kuyakhathaza ukuthi itekisi yaKwaDukuza yahanjiswa eGoli ukuze izothola isitifiketi sokusebenzisa umgwaqo.
Uthe uMnyango wezokuThutha uzokwenza uphenyo ngalokhu.
UMnuz Mchunu uthe ziningi izinto ezinga banga izingozi emgwaqeni. Uthe kungaba ukushayela imoto ngesivinini esiphezulu, ukushayela uphuze utshwala, ukungalibophi ibhande kanye nokungathobeli umthetho womgwaqo.
Uthe ekupheleni kwenyanga kaNcwaba kushone abantu abangama-714 ezingozini ezenzeke emgwaqeni